Ankizy maty mosary ary tsy raharahiana
Home » Vaovao momba ny zon'olombelona » Ankizy maty mosary ary tsy raharahiana
nandehandeha nitady hanina
Ny isan'ireo zaza tsy ampy sakafo dia nampidirina tany amin'ireo ivon-tsakafo tohanana notohanan'ny fanampiana Silamo tany Yemen dia efa nitombo avo roa heny tao anatin'ny telo volana lasa, satria nitombo ny krizy rehefa nanapaka ny famatsiam-bola maha-olombelona ny governemanta iraisam-pirenena. Nahita fitomboana 80 isan-jato ihany koa ireo reny bevohoka tsy ampy sakafo sy ireo reny vao mangataka fanampiana.
1.Nampitandrina ny Firenena Mikambana fa ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny zaza no avo indrindra amin'ny fifandonana hatreto, miaraka amin'ny zaza latsaky ny 2.3 taona atahorana ho fanjarian-tsakafo mahery vaika ary 5 atahorana tsy ampy sakafo.
2.Ny asan'ny Islamic Islamic taona lasa tany Yemen dia nanohana olona 3.6 tapitrisa tamin'ny sakafo, rano, fahasalamana ary fialofana.
2. Taorian'ny fifandonana enin-taona dia mihoatra ny antsasaky ny mponina ao Yemen no iharan'ny tsy fahampian'ny sakafo.
Taorian'ny fifandonana enin-taona dia mihoatra ny antsasaky ny mponina ao Yemen no iharan'ny tsy fahampian-tsakafo. Manampy ivon-toerana ara-pahasalamana sy ara-tsakafo 151 manerana ny firenena ny fanampiana ara-pivavahana Islamika, ary - miaraka amin'ny UN World Food Programme (WFP) - mizara fonosan-tsakafo ho an'ny olona roa tapitrisa. Na izany aza, noho ny fanapahana famatsiam-bola ny WFP dia tsy maintsy nampihena ny isan'ny sy ny fahita matetika amin'ireo fonosana ireo tamin'ny antsasaky ny taona lasa ary nitombo ny tsy fanjarian-tsakafo nanomboka teo.
Dr Asmahan Albadany, Mpandrindra ny Tetikasa Islamika fanampiana any Hodeidah, dia nilaza hoe: “Tsy voafehy intsony ny raharaha hatramin'ny nisarahan'ny fanampiana ara-tsakafo. Ankehitriny dia tototry ny foibe ary ny tranga misy zaza tsy ampy sakafo sy reny tsy ampy avo efatra heny dia avo efatra heny noho ny fahitanay tamin'ity taona lasa ity. Mahavaky fo ny mahita ny halavan'ny ankizy, hoditra sy taolana fotsiny izy ireo. Ny volana lasa teo dia zaza 13 no maty teto noho ny fahasarotana vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo ary miakatra isam-bolana ny isany. Ny ankamaroan'ny zaza dia teraka miaraka amin'ny olana satria tsy ampy sakafo ny reniny. ”
Mampitandrina ny mpiasan'ny fanampiana Silamo fa mbola ratsy kokoa izany any amin'ny faritra ambanivohitra lavitra. Ny distrika iray amin'ny dimy ao Yemen dia tsy manana dokotera mihitsy ary ny tsy fahampian'ny solika mandreraka dia midika hoe fianakaviana maro no tsy afaka mandeha mangataka fanampiana ara-pitsaboana. Ny fahantrana mamoy fo dia midika fa ny ray aman-dreny tsy mitsaha-manao safidy maharary momba ny zaza mahazo sakafo na fanafody.
Dr Asmahan dia nilaza hoe: “Mandefa vondrona mpilatsaka an-tsitrapo izahay hanao fizahana any amin'ny tanàna lavitra ary manaitra ny tranga any. Tsy manana hozatra ao amin'ny vatany ireo ankizy. Vao tsy ela akory izahay dia nanana zazalahy kely telo taona izay tsy nihaino ny fitsaboana. Nomena fanafody iray nandritra ny roa volana izahay, saingy niharatsy hatrany ny toe-pahasalamany, ka nandefa ekipa nankany an-tranony aho hanadihady. Nilaza taminay ilay renim-pianakaviana fa tsy maintsy mivarotra ilay fanafody izy mba hividianana lafarinina sy hamahanana ireo zanany hafa. Tsy maintsy nisafidy izy na nitahiry iray na nitahiry ny hafa. ”
Na eo aza ny filàna goavana, ny fihaonambe iraisam-pirenena farany natao tany Yemen tamin'ity volana ity dia nanangona latsaky ny antsasaky ny vola ilaina ary mpanome be dia be no nanapaka ny famatsiam-bolan'izy ireo.
Muhammad Zulqarnain Abbas, talen'ny fanampiana ny firenena islamika any Yemen dia nilaza hoe:
“Taorian'ny fifandonana enin-taona dia tsy hadino i Yemen - tsy jerena izany. Mahamenatra fa manapaka fanampiana izao tontolo izao rehefa mihinana ravina ny ankizy satria tsy ampy sakafo. Ny tobim-pahasalamana sy sakafo mahavelona izay anohanantsika dia tototry ny rano sy tototry ny olona tanteraka. Reny izay malemy noana no mitondra ny zanany kely an-kilaometatra maro mba ho tonga eto hitady fanampiana. Mosarena ny raim-pianakaviana satria manome ny sombin-tsakafo farany ho an'ny zanany. Manao izay rehetra azony atao ny olona mba ho tafavoaka velona fa mandao azy ireo izao tontolo izao amin'ny fotoana ilainy indrindra.
“Tsy tokony hiandry ny fanambarana ny mosary ny mpitondra eran-tany alohan'ny hanampiana ny olona mosarena ankehitriny. Ny tsy fanjarian-tsakafo dia misy fiantraikany amin'ny fivelaran'ny kognita sy ara-batana an'ny zaza mandritra ny androm-piainany sisa, noho izany ny krizy tsy hihinan-kanina dia hisy fiantraikany amin'i Yemen mandritra ny taranaka maro raha tsy misy ny fandraisana andraikitra izao. Mila fanampiana maika ny olona ary hanaiky ny fampitsaharana ady maharitra ny ankolafy rehetra. ”
Ny fiakaran'ny tsy fanjarian-tsakafo dia nanjary fiakaran'ny olana ara-pahasalamana lehibe hafa, kanefa ny hopitaly dia tsy ampy fanafody, solika ary dokotera. Mpiasa mpitsabo maro no tsy mandray karama intsony ary miasa an-tsitrapo mandritra ny 14-16 ora isan'andro.